१८६१ – १८६५
अब्राहम लिंकन (१२ फरवरी, १८०९ - १५ अप्रैल १८६५) अमेरिकाका सोह्रवहरू राष्ट्रपति थिए। यिनको कार्यकाल १८६१ देखि १८६५ सम्म थियो। यी रिपब्लिकन पार्टीदेखि थिए। उनले अमेरिकालाई उसको सबैभन्दा ठूलो संकट - गृहयुद्ध (अमेरिकी गृहयुद्ध)बाट पार लगाए । अमेरिकामा दास प्रथा अंत गरेको श्रेय लिंकनलाई नै जादछ ।उनले अमेरिकालाई त्यसको सबैभन्दा ठूला संकट - गृहयुद्ध (अमेरिकी गृहयुद्ध)देखि पार लगाईा। अमेरिकामा दास प्रथाका अन्तको श्रेय लिंकनलाई नैं जान्छ।
अब्राहम लिंकनको जन्म एक गरीब अश्वेत परिवारमा भएको थियो। ती प्रथम रिपब्लिकन थिए जो अमेरिकाका राष्ट्रपति बनेका। त्यसको पहिला ती एक वकील, इलिअन्स स्टेटका विधायक (लेजिस्लेटर), अमेरिकाका हाउस अफ् रिप्रेस्न्टेटिव्सका सदस्य थिए। ती दुइ बार सीनेटका चुनावमा असफल पनि भए।
२ बेटेका अध्यापकलाई अब्राहम लिंकनको पत्र
३ वाह्य सूत्र
वकालतदेखि कमाईको दृष्टिले हेर्नुहोस् त अमेरिकाका राष्ट्रपति बननाले पहिला अब्राहम लिंकनले बीस सालसम्म असफल वकालत गरे तर तिनको वकालतदेखि तिनलाई र तिनको मुवक्किलहरूलाई जति संतोष र मानसिक शान्ति मिली त्यो धन-दौलत बनाउनेका अघि केही पनि छैन. तिनको वकालतका दिनहरूका सैंक्ने साँचो कुन ्से तिनको ईमानदारी र सज्जनताको गवाही दिन्छन्.
लिंकन आफ्नो ती मुवक्किलहरू भन्दा अधिक फीस छैन लेन्थे जो ‘तिनको नैं प्रकार गरीब’ थिए. एक पल्ट तिनको एक मुवक्किलले तिनलाई पच्चीस डालर पठाईे त लिंकनले त्यसमादेखि दस डालर यो कहकर लौटा दिए कि पन्ध्र डालर पर्याप्त थिए. सामान्यतौरमा ती आफ्नो मुवक्किलहरूलाई अदालतका बाहिर नैं राजीनामा गरेर मामला निपटा लिने सलाह देन्थे ताकि दुइटै पक्षहरूको धन मुकदमेबाजीमा बर्बाद न हो जाये. यसका बदलहरूमा तिनलाई नका बराबर नैं फीस मिलती था. एक शहीद सैनिकको विधवालाई त्यसको पहरूशनका ४०० डालर दिलाउननका लागि एक पहरूशन एजहरूट २०० डालर फीसमा मांग रह्यो था. लिंकनले त्यस महिलाका लागि न केवल मुफ्तमा वकालतको तर त्यसको होटलमा रहने खर्चा र घर वापसीको टिकटको इंतजाम पनि गरे.
लिंकन र तिनको एक सहयोगी वकीलले एक पल्ट कुनै मानसिक रोगी महिलाको जमीनमा कब्जा गर्ने एक धूर्त मानिसलाई अदालतदेखि सजा दिलवाई. मामला अदालतमा केवल पन्ध्र मिनट नैं चला. सहयोगी वकीलले जीतनेका पछि फीसमा बँटवारा गर्ने कुराको तर लिंकनले त्यसलाई डपट दिए. सहयोगी वकीलले भने कि त्यस महिलाका �